June 22, 2019 - Update New
ယောက္ခမတွေကို အိမ်ခေါ်ပြီး ဒီပြသနာကြီး ဒီလိုကြီးဖြစ်တာ သမီးကပျော်ပါတယ်​လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဇင်သဲနိုင် ရုပ်သံဖိုင် ထွက်ပေါ်
June 22, 2019 Naing 0
ယောက္ခမတွေကို အိမ်ခေါ်ပြီး ဒီပြသနာကြီး ဒီလိုကြီးဖြစ်တာ သမီးကပျော်ပါတယ်​လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဇင်သဲနိုင် ရုပ်သံဖိုင် ထွက်ပေါ် သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဇေရဲထွန်းနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဇင်သဲနိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အိမ်နှင့်ခြံကို ပေါင်နှံထားမှုကြောင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ တရားစွဲဆိုခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က […]
မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် အမျိုးသမီးထုကြီးရဲ့ ၀ိုင်းအနိုင်ကျင့်ခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသား(ရုပ်သံ)
မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် အမျိုးသမီးထုကြီးရဲ့ ၀ိုင်းအနိုင်ကျင့်ခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသား(ရုပ်သံ) စစ်ကိုင်း နှာပေါက်အောက်မှ ခရီးသွားအမျိုးသားတစ်ယောက် ဖြစ်စဉ် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့နေသော စစ်ကိုင်း၊ နှာပေါက်အောက် မှ ခရီးသွားအမျိုးသားတစ်ယောက်၏ ဖြစ်စဉ် Saturday, June 22, 2019 ခရီးသွားအမျိုးသားတစ်ယောက် ခရီးသည်ထိုင်သည့်ခုံတွင် ကားစောင့်ရင်း မူးပြီးအိပ်နေစဉ် တရားမဝင်ဈေးရောင်းသည့်အမျိုးသမီးများ ဒီနားလာမအိပ်နဲ့ […]
သင့်ကို အံ့သြသွားစေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အာမခံထားကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်များ
သင့်ကို အံ့သြသွားစေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အာမခံထားကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်များ အာမခံထားတယ်ဆိုတာ ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုပျက်စီးယိုယွင်းမှုရှိခဲ့ရင်ပြန်လည်ကုစားပေးလျော်နိုင်ဖို့ ဒါမှမဟုတ်ပြန်လည်ကုသဖို့အတွက်လူအများစုကပြုလုပ်ကြတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ကားအာမခံ၊ အသက်အာမခံ၊ ကျန်းမာရေးအာမခံတွေရှိပေမယ့် ဒီနာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေကတော့ နာမည်ကြီးတဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အာမခံထားရှိထားပါတယ်။ ဒီအနုပညာရှင်တွေ နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့ (1)- ခရစ်စတီရာနို ရော်နယ်ဒိုရဲ့ခြေထောက် ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံးဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ စီရောနယ်ဒိုဟာ သူ့ရဲ့ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ခြေထောက်တွေသာမရှိခဲ့ရင် အခုလိုဘောလုံးလောကရဲ့ထိပ်တန်းကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ […]
LA မှာ အမိုက်စား အိမ်ကြီးတစ်လုံးကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ရလိုက်တဲ့. စမိုင်းလ်
LA မှာ အမိုက်စား အိမ်ကြီးတစ်လုံးကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ရလိုက်တဲ့. စမိုင်းလ် ပရိသတ်တွေ အများစု အားကျအတုယူစရာကောင်းတဲ့ အနုပညာမိသားစုလေးတွေထဲမှာ စမိုင်းလ်တို့မိသားစုလေးကလည်း အပါအဝင်ပါပဲ။ ထူးထူးခြားခြား အားကျစရာကောင်းလှတာကိုပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ သဒ္ဒါတရားထက်သန်လှပြီး အလှူအတန်းမှာ စိတ်တူကိုယ်တူ ရှိလှတာလေးကလည်း ထူးခြားစရာလေးပါ။ ဒါ့အပြင် ဘာသာတရားကိုလည်း ကိုင်းရှိုင်းရိုသေတတ်ကြတာကိုလည်း […]
ညဘက် အိပ်ယာဘေးမှာ ..ဖုန်းအားသွင်းပြီး မအိပ်ကြပါနဲ့.. ဖုန်းအားသွားထားတုန်း ပေါက်ကွဲမှု ဗွီဒီယိုဖိုင်
ညဘက် အိပ်ယာဘေးမှာ ..ဖုန်းအားသွင်းပြီး မအိပ်ကြပါနဲ့.. ဖုန်းအားသွားထားတုန်း ပေါက်ကွဲမှု ဗွီဒီယိုဖိုင် ကျွန်မအပါအဝင် လူအများစုကအကျင့်ဆိုးလေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ အကျင့်ဆိုးလေးတွေထဲက အဆိုးဆုံးကတော့ မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းကို မိမိတို့ရဲ့အိပ်ယာဘေးမှာထားအိပ်တတ်ကြတာပါပဲ။ အထူးသဖြင့်ဖုန်းအားသွင်းရင်းအိပ်တတ်တာမျိုးပါ။ ယနေ့ခေတ်မှာ ကျွန်မတို့အတွက် ဖုန်းဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသလိုပါပဲ အလုပ်ကိစ္စ၊ ကျောင်းကိစ္စ စသည်ဖြင့် အရေးကြီးနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ဖုန်းအားအပြည့်မရှိမှာကို သိပ်စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ မေ့လျော့သည်ဖြစ်စေ၊ […]
ကဲ ဒီတော့ မိန်းမရေ….ညည်းက သာဓု ခေါ် ..ကျုပ်က အာမင် ခေါ်မယ် ဆိုတဲ့ လင်းလင်း နှင့် ချစ်သုဝေ တို့ရဲ့ အလှု
ကဲ ဒီတော့ မိန်းမရေ….ညည်းက သာဓု ခေါ် ..ကျုပ်က အာမင် ခေါ်မယ် ဆိုတဲ့ လင်းလင်း နှင့် ချစ်သုဝေ တို့ရဲ့ အလှု ကျောင်းတက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ မုံရွာက(၆) ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ညီမလေးကို ပညာကုသိုလ်လုပ်ပေးတော့မယ့် လင်းလင်း နှင့် ချစ်သုဝေ တို့မိသားစု […]
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေနေကြပြီဖြစ်တဲ့ ဇင်သဲနိုင်တို့မိသားစု ဆွေးနွေးမှုကို Live လွှင့်ပြ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဇေရဲထွန်းနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဇင်သဲနိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အိမ်နှင့်ခြံကို ပေါင်နှံထားမှုကြောင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ တရားစွဲဆိုခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုရေးသားမှုကြောင့် ပိုင်ဇေရဲထွန်းတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ […]
ဂရုစိုက်ကြပါ…ကလေးမြို့မှာ မွေ့ယာပေါ် ဖုန်းအားသွင်းရာက အပူလွန်ပြီး အိမ်ပါမီးလောင်
ဂရုစိုက်ကြပါ…ကလေးမြို့မှာ မွေ့ယာပေါ် ဖုန်းအားသွင်းရာက အပူလွန်ပြီး အိမ်ပါမီးလောင် မွေ့ယာပေါ် ဖုန်းအားသွင်းထားရာမှ အပူလွန်၍ နှစ်ထပ်တိုက်မီးလောင် ကလေးမြို့ တောင်ဇလပ်ရပ်ကွက် နယ်မြေ ၂ ရာဇဂြိုလ်လမ်းတွင် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်က လူနေအိမ် နှစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံး မီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း မြို့နယ်မီးသတ်ဌာနမှသတင်းရရှိသည်။ […]
သူဌေးလို သုံးဖြုန်းနေပြီး အကြွေးရှိတဲ့သူတွေကို ပန်ဆယ်လို ဒဲ့ပြောပြီ
သူဌေးလို သုံးဖြုန်းနေပြီး အကြွေးရှိတဲ့သူတွေကို ပန်ဆယ်လို ဒဲ့ပြောပြီ အကြွေးမရှိရင် သူဌေးတဲ့။ သိပ်မှန်တဲ့စကားလို့ပဲ ထင်တယ်။ အကြွေးရှိလျက်နဲ့ သူဌေးလိုနေတဲ့လူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါကကျ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းပါပဲ။ ငွေမရှိရင် အထင်သေးခံရတတ်တာ မှန်ပေမယ့် ငွေမရှိတာနဲ့ အထင်မသေးတတ်သူတွေ ရှိပါတယ်။ ငွေအတွက်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား […]
အိမ်ထောင်ကွဲပြီးနောက် စေ့စပ်တော့မယ့် Lလွန်းဝါ
အိမ်ထောင်ကွဲပြီးနောက် စေ့စပ်တော့မယ့် Lလွန်းဝါ L လွန်းဝါနဲ့ L ဆိုင်းဇီတို့ မောင်နှမ နှစ်ဦးကိုတော့ တော်တော်များများ သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အဆိုတော်ကြီး L ခွန်းရီရဲ့ တူ ၊ တူမ ဖြစ်သလို နှစ်ဦးလုံးကလည်း အသံအေးအေးလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းဖြစ်တဲ့ L […]